सावधान ! गुगलमा बिर्सेर पनि नखोज्नुस् यी १० कुरा - Everest Dainik - News from Nepal
सावधान ! गुगलमा बिर्सेर पनि नखोज्नुस् यी १० कुरा
काठमाडौं, पछिल्लो समयमा हरेक कुराको जानकारीका लागि इन्टरनेट साइट गुगलको प्रयोग गर्ने कुरा सामान्य बनेको छ । कतिपय अति सवेदनशील विषयदेखि आवश्यक पर्ने साना साना कुरा समेत चाहिएमा गुगलमा टाइप गर्ने गरिन्छ ।
त्यसैले गुगलमा खोज्ने कुरामा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने र साँच्चिकै आधिकारिक जानकारी हो कि होइन भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । एउटै विषयमा हजारौं साइटमा सूचना हुनसक्छन् ।
यदि तपाई आफ्नो बैंकको वेवसाईट थाहा छ भने गुगलमा अनलाईन बैंकको युआरएल अर्थात वेभ एड्रेस सर्च नगर्न सुझाव दिइएको छ । कतिपय अवस्थामा स्क्यामर (इन्टरनेटमा ठगी गर्नेहरु)ले बैंकको जस्तै मिल्दोजुल्दो वेभसाइट बनाएका हुन्छ । यसको ठेगाना र लुक्समा केही मात्र फरक हुन्छ । कतिपय बेला यस्तो नक्कली साइटमा युजरहरुले आफ्ना संवेदनशील सूचना टाइप गर्छन् र धोकाधडीको शिकार बन्ने गर्दछन् । http://www.everestdainik.com
याे पनि पढ्नुस एनआइसि एसिया बैंकबाट ३० करोड ह्याक गरेको भन्दै रहस्य बाहिरियो
८ इकमर्श वेभसाइट
इन्टरनेटका केही साइटहरुले आधिकारिक र सही प्रकारका यस्ता सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने सुविधा दिएका हुन्छन् । तर गुगलमा खोजेर कुनै पनि नचिनेको एन्टिभाइरस या सफ््टवेयर इन्स्टाल नगर्नुहोला । कतिपय यस्ता सफ्टवेयर आफैमा भाइरस हुन सक्छन् । कतिपयले सिष्टमलाई ध्वस्त पार्न सक्छन् । ओरिजिनल र नक्कली सफ्टवेयरमा फरक गर्नुपनि कठीन काम हो । त्यसैले सतर्क रहनुहोला । जे समस्या हल गर्न सफ्टवेयर खोजिएको हो, त्यही समस्या बढाउने सफ्टवेयर कतिपयले राखेको देखिन्छ ।
यदि सपिङ साइट या ऐपमा तपाईलाई डिस्काउण्ट कुपन कोड पाइरहेको छ भने त्यो राम्रो हो । तर यस्तो कोड खोज्न गुगलको सहायता लिनु घातक हुन सक्छ । दर्जनौं नक्कली साइटहरुमा तपाईलाई यस्ता नक्कली कुपन कोड्स पाइन सक्छन् । अनि यसबाट तपाईको बैंक डिटेल्स पनि स्क्यामरसँग पुग्न सक्छ ।
ट्याग्स: google, Hacker, Scam, Surf